Shiinaha Bolier dareeraha heerkulka soo saaraha
Hoyga > Alaabada > Dareeraha heerkulka dareeraha > Dareeraha heerkulka hawada
Qiyaasta nidaamka heerkulka kululeeyaha
Dhibcaha cabbirka heerkulka birta guud ahaan waxaa ka mid ah heerkulka darbiga biyaha kululeeyaha, heerkulka darbiga birta uumiga ah, heerkulka darbiga tubbada soo saarida uumiga, heerkulka derbiga tuubbada, heerkulka darbiga tuubada superheater, heerkulka darbiga tuubbada kululeeyaha, iwm.
Qiiqa kuleylka iyo cabbirka heerkulka nidaamka dabaysha
Dhibcaha cabbirka ee nidaamka heerkulka hawada guud ahaan waxaa ka mid ah heerkulka hawada ee sanduuqa hawada sare iyo heerkulka hawada aasaasiga ah ee kulul.
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan Dareeraha heerkulka hawada soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh Dareeraha heerkulka hawada kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.